ယူနီကုဒ်သုံးရင်း ဇော်ဂျီသုံးစွဲသူနဲ့ ဆက်သွယ်ရ ခက်ခဲလို့ ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ နောက်ပြန်လှည့်ချင်သူတွေအတွက် ဒီကီးဘုတ်လေးကို share လိုက်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာ ဝန်ခံလိုတာက ကီးဘုတ်ရဲ့ အဆင်အပြင်ဟာ သိပ်ပြီး စွဲမက်စရာမကောင်းပဲ မသပ်မရပ် ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူဟာ pro တစ်ယောက် မဟုတ်တာ သိရင် ဒီအပြစ်လောက်ကိုတော့ ခွင့်လွှတ်နိုင်ကောင်းပါရဲ့လို့ တွေးမိလို့ ခုလို Share လိုက်မိပါတယ်။ ဒီကီးဘုတ်လေး ရေးစဥ်က အခြားသူများကို share ဖို့ မစဥ်းစားမိပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဖုန်းဆော့ဖ်ဝဲ ရေးဖူးတဲ့ သူတိုင်းလိုလို ကီးဘုတ်တစ်ခုတော့ ရေးကြည့်ဖူးကြပါတယ်။ အဲ့ဒိလို ရေးဖူးတဲ့သူတွေထဲမှာ ကိုယ်လည်း အပါအဝင်ဖြစ်လာတော့ ကိုယ်ရဲ့ကီးဘုတ်ဟာ ဘာမျှမထူးခြားပဲ share မလုပ်ချင်ပါဘူး။ ကိုယ်တိုင် သုံးကြည့်တဲ့အခါ ကျနော့်အတွက် အင်မတန်အသုံးဝင်နေပါတယ်။ အစားအသောက်ကောင်းကောင်း စားမိတဲ့အခါ ချစ်ခင်မြတ်နိုးသူကို ကျွေးချင်တဲ့ ဆန္ဒပေါ်လာသလို၊ စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ် ဖတ်မိတဲ့အခါ မိတ်ဆွေရင်းချာကို ပေးဖတ်ချင်စိတ် ပေါ်လာသလို၊ ဒီကီးဘုတ်လေး သုံးမိတဲ့အခါ အခြားသော ကျနော့်လို အသုံးတည့်မယ့်သူတွေအတွက် share ချင်လာမိပါ
ဟိုတနေ့က Facebook ထဲကအသိတစ်ယောက် ဇော်ဂျီနဲ့ ယူနီကုတ်ကို windows နဲ့ Mac OS အကြောင်း နှိုင်းယှဉ်ပြတဲ့ post လေးကို Like လိုက်တော့ ကိုယ်တွေလဲပြောင်းလဲချိန်တန်ပီလို့ အတွေးရောက်လာခဲ့ပါတယ် ဝင်းဒိုးက လူသုံးများတယ် Apple os က Unicode font လိုဘဲ အသုံးမများဘူး နောက်ပိုင်း စတိဂျော့ကြီးက အိုင်ဒီယာရပီး အိုင်ကျူးနဲ့ ပြန်ရေပန်းစားအောင်လုပ်တယ် ဒါမှ အောင်မြင်လာမယ်ပေါ့ ယူနီကုဒ်သမားတွေလဲ အဲဒီလမ်း လိုက်သင့်ပါတယ်ပေါ့ သေချာတွေးကြည့်တော့ နားမလည်တဲ့သူဆို သူပြောတာ ဟုတ်နေသလိုပါဘဲ၊ ဒါပေမယ့် လုံးဝ အိုင်ဒီယာလွဲချော်နေသလိုမျိုးပါဘဲ၊ မတတ်တာလား မသိတာလား ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရေးတာလဲ စဉ်းစားမရပါဘူး (သေချာတာကတော့ အခုနေ အများ အဆင်ပြေနေတဲ့ ဇော်ဂျီဘဲ ဆက်သုံးစေချင်တာဘဲနေပါ့မယ်) ၊ သူ့အိုင်ဒီယာလေးဘဲ ပြန်ကောက်ရရင် အခုအများသုံးနေတဲ့ ဝင်းဒိုးက လုံခြုံရေးအရ စိတ်ချရပါပီလား၊ မရောင်းရတဲ့ MAC os တွေလောက် တကယ်တန်း လုံခြုံရေး စိတ်မချရပါဘူး ၊ ဟိုတနေ့ကဘဲ ဖေ့ဘုတ်ပိုင်ရှင်ကြီးတောင် သူ့အနီးအနားက စိတ်ချရပါတယ်ဆိုတဲ့ MacBooks တွေရဲ့ ကင်မရာတွေ စပီကာ တွေကိုတောင် စတစ်ကာနဲ့ ကာပိတ်ထားရပါတယ်၊ နောက်တကယ်တန်း လုပ်ငန်းခွင်ဆို macbook တွေဘဲအသု
အခုနေ အများသုံးနေတဲ့ဖေါင့်က ဇော်ဂျီဖေါင့်ပါ၊ အခု iOS 10 မှာပါလာတာက ယူနီကုဒ်ဖေါင့်ပါ၊ ဇော်ဂျီဟာ ယူနီကုဒ်ဖေါင့်မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါကြောင့် iOS 10 မှာတော့ စနစ်မှန်တဲ့ ယူနီကုဒ်ဖေါင့်ပါလာလို့ အသုံးပြုသူမှ ဇော်ဂျီဖေါင့် ထည့်သုံးရင် ယခင်လို မှန်ကန်စွာမပြနိုင်တော့ပါဘူး၊ ပါလာတဲ့ မြန်မာယူနီကုဒ်ဖေါင့်ကို ဂျေးဘရိတ်ရမှ ဖယ်ထုတ်/အစားထိုးမှဘဲ ဇော်ဂျီနဲ့ရေးထားတဲ့ စာတွေ အတည့်မြင်ရတော့မှာပါ၊ မဂျေးဘဲနဲ့ အတည့်မြင်အောင်လုပ်မရဘူးလား? Facebook အစား Like book apps သုံးမယ် ဆို likebook ထဲမှာတော့ ဇော်ဂျီနဲ့ရေးထားတာတွေ အတည့်မြင်ရမှာပါ Safari ထဲမှာလဲ zawgyi bookmark လေးသုံးရင် ရပါသေးတယ် Message, Viber တွေကတော့ ဇော်ဂျီနဲ့ရေးထားတာတွေဆို အတည့်မြင်ဖို့ရာ zawgyi Uni converter apps တွေ သုံးရပါလိမ့်မယ်၊ ဇော်ဂျီနဲ့ ရေးပို့လာတာတွေ တိုက်ရိုက်ဖတ်မရတော့ပါ၊ Contact ထဲမှာလဲ ယခင် ဇော်ဂျီကီးဘုတ်နဲ့ ရေးမှတ်ထားတဲ့ မြန်မာအမည်တွေဆို အတည့်အတိုင်းမပေါ်တော့ပါဘူး၊ အဲဒီအခါကျ ဖေါင့် converter သုံးပီးဘဲ ယူနီကုဒ်စနစ်ကို ပြောင်းသိမ်းပေးမှ အတည့်မြင်ရမှာပါ iOS 10 မှာ မြန်မာစာ မှန်ပီလား ?
ယူနီကုဒ်နဲ့ပါတ်သတ်ပီး သိပ်အများကြီးလဲ မရေးချင်ပါဘူး အထူးသဖြင့်သုံးဖို့ရာကိုပေါ့ တွန်းပါများလေ ကိုယ်ရောက်စေလိုတဲ့နေရာမရောက်ဘဲ ဆန့်ကျင်ဘက်ရောက်သွားတာမျိုးလဲရှိတတ်လို့ပါ၊ ဇော်ဂျီမကောင်းဘူး နဲ့ ရေးတာပြောတာများလေ မှန်ပေမယ့်လဲ ကြာတော့ နားခါးလာပီး နစ်နာတယ်ထင်ပီး ဂရုနာဖြစ်ဇော်ဂျီဘက်ကနေ နေပီးရက်သားဖြစ်သွားတာလဲ အများစုနေပါလိမ့်မယ်၊ အမှန်တော့ နာစရာလဲမရှိပါဘူး သူကဖေါင့်ပါ အသက်လဲရှိမနေပါဘူး ပြောရရင် ကွန်ပြူတာထဲက မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာ နေရာယူထားတဲ့ ၁၀၀၁ အစုအဝေးလေးတွေပါဘဲ၊ သူ့မှာလဲ မြန်မာစာလုံးတွေ ဖြစ်တဲ့ က ကနေ အ အထိလဲပါပီးသားပါဘဲ၊ တကယ်တော့ အပြစ်ပြောရရင် စထွင်တဲ့သူကိုဘဲ အများက လက်ညှိုးထိုးကြပါတယ် တွေးကြည့်တော့ သူလဲ အင်တာနက်စသုံးခါစဆိုတော့ ကိုယ့်မြန်မာစာလုံး အင်တာနက်ပေါ်အရင်ရောက်စေချင် ငါတို့ ထွင်တဲ့ စာလုံးဖေါင့်ဖိုင်လေး အင်တာနက်ပေါ် မြင်ရပီဟေ့ စတဲ့ ပီတိလေးနဲ့လုပ်တာဘဲနေပါ့မယ်၊ နောက်တော့မှ ဒါဟာတကယ်တန်း စနစ်တကျ မလုပ်ခဲ့တာ သူ့အတွက်အမှားမှန်းသူသိနေလောက်မှာပါ၊ ဘယ်သူမဆို အမှားလုပ်နိုင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် မှားတဲ့ အလိုက်အထိုက် ပြန်ခံရတာလဲ လောက ညီမျှခြင်းသဘောပါဘဲ၊ ဆိုတော့ ထွင်တဲ့သူလဲ သူ့စေတနာ အကျိုးပေး အလျှောက
မသိသေးသူများ အတွက်ပါ Unique ဆိုတာက မြန်မာလိုဆို တစ်ခုထဲ သီးသန့်ဖြစ်သော code အစုအဝေး ကနေဆင်းသက်လာတာနေပါ့မယ်၊ သီးသန့်ဖြစ်တည်နေတာဆိုတာမျိုးက ဥပမာ နေဆိုရင် တစ်လုံးထဲရှိပါတယ် သူ့ကိုမူတည်ပီး အရှေ့အနောက်တောင်မြောက် ခွဲလို့ရပါတယ် ဓူဝံကြယ် ညအခါ မြောက်အရပ်မှာ ရှိတာကလဲ သီးသန့်သဘောမျိုးပါဘဲ၊ ၂ လုံးရှိနေရင်တော့ တောင်သွားရမလို မြောက်သွားရမလိုနဲ့ လိုရာခရီးမရောက်နိုင်တော့ပါဘူး၊ Code ဆိုတာကတော့ ဂဏန်းအစုအဝေးလေးတွေပါ ကွန်ပြူတာသမားတွေဆို မြင်လွယ်ကြမှာပါ ကွန်ပြူတာက ကျွန်တော်တို့ A လို့ရေးရင် တကယ်တန်း စကရင်မှ ပြန်ပြဖို့ရာ A ဆိုတာ သူမသိပါဘူး A အစား သူသိနားလည်တဲ့ ၀ နှင့် ၁ တွေကိုဘဲ အစီအစဉ်အစုအဝေးတစ်ခုအနေနဲ့ မှတ်သားပါတယ် ဥပမာ ၁၀၀၁၀၁ စသည့် ကုဒ်အစုအဝေးနဲ့ပါ၊ ၁ နှင့် ၀ ဆိုတာကတော့ မြင်လွယ်အောင်ဆို လျပ်စစ်ဗို့အား ရှိခြင်း မရှိခြင်း သဘောမျိုးပါ လျပ်စစ်ဗို့အားလေး ရှိနေရင် ၁ မရှိနေရင် ၀ ပေါ့ ဆိုတော့ ကွန်ပြူတာက A ဆိုရင် ၁၀၀၁၀၁ အနေနဲ့ သိမ်းထားတယ် ကျွန်တော်တို့ ရိုက်လိုက်ရင်လဲ စကရင်မှာ ပြန်ပေါ်ဖို့ရာ ၁၀၀၁၀၁ ကိုဘဲ ပြန်ထုတ်ပေးပါတယ် ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့က ကွန်ပြူတာမှ မဟုတ်တာ သူက ဆိုတော့ အဲဒီ ၁၀၀၁၀၁ ကိုဘဲ A
ယူနီကုတ် ပြောင်းလဲ အသုံးပြုရေး လှုံဆော်လို့ နဂိုလို စာတွေ အတည့် မမြင်ရတော့ စိတ်ဆိုးကြနဲ့ ဖြစ်လာတဲ့ နားလည်မှုလွဲ အွန်လိုင်းတိုက်ပွဲတွေ တိုက်ပွဲတွေကလဲ ကြည့်လိုက်ရင် အကြမ်းကြီးတွေပါဘဲ 😁 ဆိုတော့ ဟို တစ်ခါတုန်းက ကမ္ဘာကြီးလုံးပါတယ် ပြောလို့ အသတ်ခံလိုက်ရသူလိုဘဲနေပါ့မယ် 😂 အများစုကတော့ အဆင်ပြေသလိုလေး နေကြပါတယ် ဒါကတော့ ပြောင်းလဲဖို့ရာအတွက် အခြေအနေကောင်းပါဘဲ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကို မဖြစ်မနေ ပြုကြရမှာပါ၊ ပြုလဲပြုသင့်တယ် ပြုကြမယ့် သူတွေလဲရှိနေမှာပါ မဖြစ်မနေ အခြေအနေမှဘဲ ပြောင်းမယ် ဆိုသူတွေလဲများပါတယ် အဲဒီ မဖြစ်မနေ အခြေနေက ဘယ်တော့ရောက်လာမလဲဆိုတာက ကမ္ဘာကြီးလုံးနေသလိုပါဘဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဉာဏ်နဲ့ဘဲ ချင့်ချိန်မြင်နိုင်မှာပါ၊ ဉာဏ်လေးနဲ့ မထောက်ရှု့ကြည့်ရင်တော့ သေချာတယ် အဲဒီအခြေအနေကို မမြင်နိုင်ပါဘူး၊ ပိုဆိုးတာက အခုဇော်ဂျီက အတည့်မြင်နေရတော့ ဝေးဝေးပြေးကြည့်နိုင်တဲ့ ယာဉ်လေးရထားသလို ခပ်ဝေးဝေး ပြေးကြည့်တော့လဲ ကမ္ဘာအပြားကြီးဘဲ မြင်မှာပါ၊ ဟုတ်ကဲ့ မှန်ပါတယ် ကမ္ဘာကြီးပြားပါတယ် နောက်နေ့လဲ ပြားပါတယ် သဘက်ခါလဲ ပြားမှာပါဘဲလို့လေ 😂 🎶 တစ်ချက်ကလေး စောင်းငဲ့ကြည့်အုန်း 🎶 လို
ကျွန်တော့မှာ ဘာများအပြစ်ရှိပါသလဲ ခင်ဗျာ? ကျွန်တော်နောက်ကျမှ ထွက်ခဲ့ရတာ ပြည့်စုံစံမှီအောင် လုပ်ခဲ့ရလို့ပါ ဟိုးရှေးခေတ် မင်းသားနှစ်ပါး ဘုရား အလျင် အမြန်တည်ပီး ရှင်ဘုရင် နေရာလုရသလိုမျိုးလို့ ဖြစ်စဉ်တူနေခဲ့တယ်လေ ပြိုင်ဘက်မင်းသားလေးက ညတွင်းခြင်းပီးအောင် နှီးတွေနဲ့တည်ခဲ့တာပါ ဟုတ်ပါတယ် မှန်ပါတယ် ဘုရားလဲရုပ်လုံးပေါ်ခဲ့တာပါဘဲ ဒါပေမယ့် မင်းသားကြီးကတော့ ရှေးထုံးအစဉ်အလာအတိုင်း အုတ် ဘိလပ်မြေ အခိုင်အခန့်တည်တော့ အချိန်ပိုကြာသွားခဲ့ပါတယ်၊ ဒါနဲ့ဘဲ မင်းနေရာကို စွန့်ခွါခဲ့ရတယ်ပေါ့၊ ဒါပေမယ့် ဘယ်မင်းသား တည်တဲ့ ဘုရား ရေရှည်တည်တံ့မလဲက အချိန်သက်သေနေပါ့မယ်၊ ဒါမျိုးတွေ သူမေးခွန်းထုတ်ကောင်း ထုတ်ပါလိမ့်မယ် နောက်အခု နေရာယူပွဲက အလျင်ပီးဖို့ မဟုတ်ပါဘူး အဆင်ပြေဖို့ရာ တစ်ခုထဲလဲ မဟုတ်ပါဘူး မြင်နေရဖို့ တစ်ခုထဲလဲမဟုတ်ပါဘူး အနာဂတ် ဘဝ ပိုမိုအဆင်ပြေစေဖို့ဆိုတာ သူသိနေစေချင်ပါလိမ့်မယ်၊ အခုတော့ အများက ဆန့်ကျင်ဘက် နောက်ကျလို့ အပြစ်မြင် အစွန်းရောက်သူတွေက ဖိအားပေး သုံးသူတွေကို လှောင်ပြောင် ရှုံချ စည်းအပြင်ကိုတွန်းထုတ်ကြနဲ့လေ သူငိုနေမယ် မြင်နိုင်မလား သူနာကျင်နေမယ် သူဖျားနာနေခဲ့မယ် ဒါပေမယ့် သေချာတယ် သူအသက်ရှင်နေပါလိမ့
နေလာတဲ့ အိမ် ဘယ်အချိန်မှာ ပြောင်းမလဲ။တချို့ကလဲ ခေါင်တွေရွဲ နံရံတွေကွဲ အိမ်လုံးလုံးရွဲမှဘဲ ပြောင်းကြသလို တချို့ကလဲ ဟိုနားလေးနဲနဲပဲ့တာနာ ဟိုနေရာလေးဆေးသုပ်ပါအုန်း ဒီနေရာလေး တိုင်ကူပါအုန်းနဲ့ပါဘဲ အိမ်ငှားတွေဆိုရင်တော့ စာချုပ်ပြည့်ရင် ပြောင်းရမှာမို့ ပြောင်းချိန်တန် ပြောင်းချိန်ကျပီဆိုရင်ဖြင့် ကြိုတင် အထုတ်အပိုးလေးတွေ ထုတ်ကြနဲ့ အချိန်ရပါတယ် တခါတလေ စာချုပ်မပြည့်ခင်ဆို အိမ်ရှင်ခပ်ဆိုးဆိုးတွေက ဖိအားပေးအတင်းပြောင်းခိုင်းတာနဲ့တွေ့ကျတော့ အိမ်သစ်ရှာရ ပူပန်ရနဲ့ ကသိကအောက်ဖြစ်ရပါတယ်၊ နောက်ပြောင်းရမယ့် အိမ်အသစ်မှာကလဲ အတူတွဲနေရမယ့် ပါတနာက ကိုယ်နဲ့အခန့်မသင့်ရင်လဲ မလွယ်ကြောပါဘဲ ပိုနေမြဲ ကျားနေမြဲက မှန်နေတတ်သလို ထိုင်နေရင်အကောင်းသား ထသွားမှ မုဆိုးမသွားရာ မိုးလိုက်လို့ရွာသကိုဆိုသလို ဘုန်းကြီးအမှုရွာပါတ်ပီ တိုင်တွေ လည်နေတော့တာပါဘဲ (ဘာမှမဟုတ်ဖူး စကားပုံတွေမေ့သွားလို့ ပြန်ရွတ်နေတာပါ) အခုလဲ iOS 10 နှင့်အတူ အိမ်ဟောင်းလေးက အိုင်ဖုန်းချစ်သူတွေအတွက် စာချုပ်ပြည့် အိမ်သစ်တက်ဖို့ရာ တံခါးလေးလာခေါက်နေပါပီ၊ ဒီတစ်ခါ အိမ်သစ်မှာတော့ အရင်အိမ်ဟောင်းတွေမှာ မကြုံခဲ့ဖူးသေးတဲ့ ကူညီပေးမယ့် သူလေးလဲ အသင့်ပါလာပါပီ ဒါပ
Post ခေါင်းစဉ်ရဲ့အဖြေကိုတော့ ကိုယ်တိုင်ဘဲ တွေးကြည့်စေချင်ပါတယ်။ အတိတ် ဟိုတနေ့ကရေးခဲ့တဲ့ သီပေါမင်း ပါတော်မူခဲ့တာ ဘာလို့ပါတော်မူခဲ့ပါသလဲ ကျွန်တော်တို့ ခေတ်စနစ်နောက် အမှီမလိုက်နိုင်ခဲ့လို့ပါဘဲ ဘာလို့ မလိုက်နိုင်လဲ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု စွမ်းများလို့လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ငါ့ဓါးတစ်ချက်ခုတ်ရင်ကွာ အင်္ဂလိပ်တွေ ဘယ်လိုနေမလဲ ဒါပေမယ့် ဒါကိုသိမြင်တဲ့ ကနောင်မင်းသားကြီးကလဲ သူ့ကိုယ်စွမ်း ဉာဏ်စွမ်းရှိသရွေ့ လုပ်ခဲ့ပါတယ် အဲဒီအချိန်မှာ ကနောင်မင်းသားကြီးလိုမျိုး ၁၀ ယောက်ဘဲရှိလုံလောက်ပါတယ် မြန်မာပြည် သူ့ကျွန်ကျစရာမရှိခဲ့ပါဘူး ဆိုတော့ နည်းစနစ်ပိုင်း ကျွန်တော်တို့ နိမ့်ကျခဲ့တယ် ဆိုတော့ ဦးဆောင်သူ ဘုရင်ပါသွားခဲ့တယ် ပိန်းပိတ်အောင် မှောင်လို့မှမက မှောင်မိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် မမှားပါဘူးလို့လေ။ ပစ္စုပန် ထိုအတူ ယခုအခြေအနေကို ကြည့်ပါ အိုင်ဖုန်း ယိုးဒယား ဖိလစ်ပိုင် အကုန် စီရီသူတို့ပြောတာ နားလည်ပါတယ် ပြန်ပြောနိုင်မယ် မပြောနိုင်တောင် သိပ်မကြာမီရလာမှာပါဘဲ ဒါဘာကြောင့်လဲ ရှင်းပါတယ် ဆက်သွယ်ရေး အဆင်ပြေလို့ တို့တွေလဲ တယ်လီနော အမ်ပီတီ အူးအူးရီဒူး တို့ရှိနေပီ ဇော်ဂျီလဲရှိတယ် မရပါလား နောက် သူတို့ အင်္
Revolution ဆိုတာလေးကို အခြေအနေတစ်ခုကနေ တစ်ခုထင်ထင်ရှားရှား ပြောင်းလဲသွားတဲ့ အခြေအနေအချိန်အခါမျိုးတွေမှာ အသုံးပြုကြပါတယ် ကမ္ဘာပေါ် ဒိုင်နိုဆောတွေ ပျောက်ကွယ်သွားတယ် ကောင်းကင်ကင်က ကြယ်တာရာ အကြီးကြီးတွေ ကမ္ဘာကို ဝင်တိုက်ခဲ့လို့လို့ ဆိုပါတယ် တကောင်တမှီးမှမကျန်ခဲ့ပါဘူး ဂြိုဟ်သားတွေ လာပစ်သွားတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် နောက်လူသားတွေ မျောက်ကနေ ပုံစံအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲ လာတယ် တွေးတော ရေးသားနိုင်တယ် ဒါလဲ revolution တစ်ခုလို့ဆိုမမှားပါဘူး စာရေး စက္ကူကို တီထွင်ခဲ့တယ် စာတွေတော့ ရေးနိုင်လာတယ် ဒါပေမယ့် ကုန်ကြမ်း သစ်တောတွေ အမြောက်အများ ပျက်ဆီးခဲ့ပါတယ် ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာတယ်ပေါ့ နောက် လည်လည်ပီး သွားတဲ့ ဘီး တီထွင်တယ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အဆင်ပြေတယ် ကိုလိုနီ နယ်ချဲ့ စနစ် ကို ပိုအားပေးမယ်ထင်ပါတယ် Apple က အိုင်ဖုန်းကို တီထွင်ပြတယ် လူတွေအများကြီး ဝိုင်းသုံးကြတယ် ဒါပေမယ့် ယခင် စျေးကွက်ဦးထားခဲ့တဲ့ နိုကီယာက အခုတော့ ဝယ်သူအဆင့်ဆင့်ပြောင်းခံနေရလောက်အောင်ကို ကျဆင်းသွားတယ် တီဗီတွေ ပေါ်လာတယ် ကျွန်တော်တို့ အိမ်တွေထဲ ရောက်လာကြတယ် ဒါပေမယ့် နည်းပညာ နောက်ကျလို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပြန်မရနိုင်တဲ့ resource လို့ခေါ်ရမယ့်
သိပ်ကြီးကောင်းလွန်းနေလို့ သာလွန်းနေလို့ ဒီဘက်ကို နဲနဲ့ငဲ့ပေးပါအုန်းတဲ့ Dev တွေ ကြိုးစားပေးကြရင် ဇော်ဂျီ တိုးတက်မလာနိုင်ဖူးလား ဝိုင်းပြောပေးကြရင် ကမ္ဘာက လက္ခံလာမယ်ပေါ့ နောက်အများသုံးကလဲဖြစ်နေ ယခုက ဤ ကနေလဲ ကျွဲဖြစ်နေပါပီ သူ့ကိုဘဲ ရအောင်ပြောင်းကြည့်ပါလား ဒါလေးတွေက သို့လော သို့လောနှင့် သံသယတွေနဲ့ပါ အချိုးအဖဲ့ခံ ဇော်ဂျီဘက်က နစ်နာတယ် တွေးကြပါတယ် ဂရုနာ သက်ဝင်ကြပါတယ် အသက်မရှိဘူး ဘယ်လိုပြောပြော သက်ရှိလိုဘဲ ပြုမူကြ သူ့အတွက်ဘဲ မှန်သူတွေနဲ့ ငြင်းခုန်ကြနဲ့ပါဘဲ၊ တို့ကအများစုပါ တို့မသုံးရင် သူတို့လဲ ဘာမှ ဖြစ်လာစရာမရှိဘူး တို့တွေစည်းလုံးပီး နောက်ရအောင်ပြင်ဆင်ကြတာပေါ့ စသည်နဲ့ပေါ့လေ နည်းပညာပိုင်းအရ ဇော်ဂျီဟာ ဘယ်လိုမှ စနစ်နဲ့ အလုပ်လုပ်ဖို့ရာ အဆင်မပြေပါဘူး နေရာတွေ အများကြီး ယူမယ် ရှုပ်ထွေးမှုတွေ များစွာပေးပါလိမ့်မယ်၊ ဟိုတနေ့က တွေ့လိုက်တာလေး မန္တလေးဆို သူမှာ မှတ်ရင် သူနဲ့ရေးရင် အမျိုးပေါင်း ၂ ရာလား ၃ ရာလားရှိပါလိမ့်မယ်၊ ဆိုတော့ မန်မိုရီနေရာစားပါတယ် အခုမန်မိုရီစျေးတွေတောက်လျောက်ကျဆင်းတယ်ထား ရှာဖို့ရာ အချိန်ယူရပါတယ် ဘယ်လောက်မြန်တဲ့ တွက်ချက်သူထား သုံးသုံး စွမ်းအင်အလဟသတ်ဖြတ်ပါတယ် ဖုန်းပူတာ သူ့က
အခုနေ ဇော်ဂျီသုံးသူတွေက အများဆိုတော့ လူနည်းစုသုံးကြတဲ့ ယူနီကုဒ်ကို ပြောင်းလဲ အသုံးပြုကြဖို့ တိုက်တွန်းရတာက အခက်အခဲတစ်ခုပါဘဲ၊ အဆင်ပြေနေတာတစ်ခုကနေ မရည်ရွယ်ဘဲ အဆင်မပြေစေသလိုဖြစ်စေတော့ တော်ရုံဆို လက်ခါကြပါတယ်၊ မနေ့က အသုံးပြုသူတစ်ယောက်ကမေးလို့ ထည့်ပုံထည့်နည်း သဘောသဘာဝ ရှင်းပြလိုက်တယ် ကျေနပ်အဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့ ဒါပေမယ့်လဲ လောလောဆယ် အဆင်ပြေအောင် ဇော်ဂျီလေး သုံးပါအုန်းမယ်တဲ့၊ အေးပါကွာပေါ့ တို့တွေ အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရက တိုက်တွန်းတာလေး လိုအပ်သလို ညွှန်ကြားတာလေးစောင့်ကြတာပေါ့လို့ဘဲ သိသွားတာလာမေးတာလေးဘဲ အမြတ်ပေါ့လေ၊ ယူနီကုဒ် ထည့်လိုက်ရင် ယခင်ကလိုစာတွေ မတည့်တော့ဘူး ဖတ်မရတော့ဘူး ရိုက်တာတွေလဲ မှားနေတာဆိုတာက ယခင်စာစီစနစ်အဟောင်းက စက်ထဲမှာ အသုံးပြုနေသေးလို့ စာစီစနစ်အဟောင်း(ဇော်ဂျီ) ကို စနစ်အသစ်( ယူနီကုဒ်) သို့မပြောင်းရသေးလို့ ဆိုတာ အခုထိမသိသေးသူတွေ အများကြီးဘဲ ရှိနေပါသေးတယ်၊ အဟောင်းကို စွန့်အသစ်ကို သုံးဖို့ရာကလဲ ရုတ်တရက်ဆို အများက သူတို့စက်မှာလဲ မထည့်ရသေးလို့/ ထည့်လိုက်ရင်လဲ ယခင်ရှိပီးသားစာတွေ ဖတ်မရမှာဖြစ်လို့ (ယခင်ရှိနေတဲ့ ဇော်ဂျီနဲ့ရေးတဲ့စာတွေဖတ်လို့မရပါ၊ သူ့အသစ်နဲ့ သူသီးသန့်သုံးသွားရင်တော
မြန်မာစာသည် တို့စာ မြန်မာစကားသည်တို့စကားတဲ့ ငယ်ငယ်တုန်းက သင်ရတာလေးပေါ့ အင်း မြန်မာမှာ မွေးတာဘဲ ဘာလို့များ ထူးပီး မြန်မာစာသည်တို့စာ မြန်မာစကားသည်တို့စကားဖြစ်ကြောင်း ထူးပီး ချီတက်ကြ ကြွေးကြော်ခဲ့ကြသလဲပေါ့ ဟိုတုန်းက အင်္ဂလိပ်တွေ နယ်ချဲ့ ကျူးကျော် အုပ်ချုပ်ကြလို့ပါ အင်္ဂလိပ်တွေက သူ့စာပေတွေကို ရုံးတွေမှာ ကျောင်းတွေမှာ သုံးရမယ်ပြဋ္ဌာန်းကြလို့ပါဘဲ၊ ကြာတော့ မြန်မာစာဟာ ဒုတိယအနေနဲ့ ရပ်တည်ရမယ် နောက်လိုက် ဘာသာ စကား ဖြစ်ရမယ်ပေါ့ ဒီအတွက် မခံနိုင်တဲ့ မျိုးချစ်ပညာတတ်တွေက ဒါကိုလမက္ခံဘူးဆိုပီး တော်လှန်ကြပါတယ်၊ ဒါနဲ့ အင်္ဂလိပ်တွေ အရှုံးပေးခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်၊ အဲဒီတုန်းက ကျောင်းသား ပြည်သူတွေ ညီညွတ်ကြလို့နေပါ့မယ်၊ အမျိုး ဘာသာ သာသနာ ရေရှည် အဒွန့်ရှည်တည်တံ့ဖို့ရာက လိုက်နာကျင့်သုံးသူတွေ အပြင် အဲဒီလိုက်နာကျင့်သုံး သူတို့ကနေ ရေးတဲ့ ပြောတဲ့ စကားစာလုံးလေးတွေက မရှိမဖြစ်အရေးပါလှပါတယ်၊ နှုတ်တစ်ရာ စာတစ်လုံးဆိုသလို စာလုံးက နှုတ်ကပြောတာထက် ပိုအရေးကြီးပြန်ပါတယ်၊ ကွန်ပြူတာခေတ်ကြီး ရောက်လာတယ် ကျွန်တော်တို့ စာပေ စာလုံးတွေဟာ အရေးကြီးတဲ့ ကဏ္ဍကနေ ပါဝင်လာအုန်းမှာပါဘဲ၊ ရှေးတုန်းက စာပေတန်ဖိုး ဘယ်လောက်ကြီးလဲဆို ဘုရား
Myfont ဆိုတဲ့ apps ထဲကနေ နှစ်မျိုးမြင်ဖေါင့် ဖြစ်တဲ့ hybrid font ဖြစ်ဖြစ် Unicode font ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုထည့်လိုက်ရင် ယူနီကုတ်နဲ့ရေးထားတာတွေမြင်လာရပါမယ် ဒါပေမယ့် ဇော်ဂျီစာတွေတော့ ယူနီကုဒ်ထည့်လိုက်ရင် ဖတ်မရတော့ပါဘူး၊ ၂ မျိုးမြင် hybrid font ထည့်သုံးရင်တော့ ၂ ခုစလုံးဖတ်လို့ရသွားမယ် ဒါပေမယ့် ဇော်ဂျီနှင့် ရေးထားတာတွေကတော့ ၈၀% နှုန်းဘဲအတည့်မြင်ပါမယ် (ဆိုတာက သဝေထိုးရှေ့နောက်နေရာလွဲတာတို့ ယပင့် ရရစ်တွေလွဲပါတယ်) ယူနီကုဒ်ဖေါင့်/ ၂ မျိုးမြင် hybrid font ထည့်လိုက်ပီးရင်တော့ ယူနီစာတွေဘဲ အတည့်ပေါ်ပါမယ် (hybrid font ဆို ဇော်ဂျီ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းဘဲ အတည့်မြင်ပါမယ်) ဆိုတော့ ရေးတဲ့ကီးဘုတ်ကလဲ ယူနီကုဒ်ပုံစံစာစီထားတာတွေ ထွက်လာမှ အတည့်ပေါ်ပါမယ် စာပို့စာယူဆိုလဲ တစ်ဖက်က လက္ခံတဲ့စက်က ယူနီကုဒ်ဖေါင့်ထည့်ထားမှ ယူနီကုဒ်ကီးဘုတ်နဲ့ ရိုက်ပို့လာတဲ့စာတွေကို မြန်မာလို အတည့်မြင်ရပါမယ်၊ အိုင်ဖုန်းမှာ ယူနီစာစီစနစ်တွေရေးဖို့ရာ တီတီကီးဘုတ်ထဲမှာပါဝင်လာပီးသားပါ၊ ဇော်ဂျီဖေါင့်တစ်ခုဘဲ ဖုန်းထဲထည့်ထားရင်တော့ ယူနီကီးဘုတ်နဲ့ရိုက်ရင်/ ရိုက်ထားတဲ့စာတွေ အတည့်မမြင်/ဖတ်မရပါဘူး၊ အိုင်ဖုန်းမှာ ယူနီကီးဘုတ်အလုပ်လုပ်ဖို့ရာ စတိုးကနေ
ယူနီကုဒ် ဖေါင့်ထည့်ထားသူ အသုံပြုသူများအတွက် ဇော်ဂျီဖေါင့်နဲ့ ရေးထားတာတွေကို ဖတ်ဖို့ရာဆိုရင် hybrid font တွေက ကူညီပေးပါတယ် hybrid တွေဟာ ၈၀ ၉၀% လောက်မှန်တယ် ဆိုပေမယ့် စစချင်းဆို ဖတ်ရမလွယ်ပါဘူး တချို့စာလုံးတွေက စာလုံး၂ ထပ်လို အောက်ရောက်သွားလေ့ရှိပါတယ်၊ ဖတ်နေကျသွားရင်တော့ စဉ်းစား ဖြည့်ဖတ်သွားလို့ရပါတယ်၊ (ဇော်ဂျီ တစ်ခုထဲသုံးသူများ/ထည့်ထားရင်တော့ ယူနီနဲ့ရေးထားတာတွေဆို အတည့်ဖတ်မရတော့ပါဘူး) အခုဖေါင့်လေးက ရှိပီးသားကိုဘဲ နဲနဲပြင်ဆင်ပီး စာလုံး အပေါ်ရောက်အောင် လုပ်ထားပေးပါတယ် ဒီအတွက် စာလုံး ၂ ထပ်နေရာတွေမှာတော့ ဖတ်ရ ပြဿနာရှိလာပါလိမ့်မယ်၊ တက္ကသိုလ်ကို တကကသိုလ် စသည်ဘဲ ပြနိုင်ပါလိမ့်မယ် နောက်အောက်ပါ ပြဿနာလေးတွေ ရှိပေမယ့် ယခင်ကထက်စာရင်တော့ ဇော်ဂျီကို ဇော်ဂျီနဲ့သာပြလို့ ဖတ်ရနဲနဲပို အဆင်ပြေလာမယ်လို့ ထင်ပါတယ်၊ ဒါလေးထည့်ထားပီး ttkeyboard ထဲက ယူနီစာလုံးပုံစံထွက်စေတဲ့ ယူနီကီးဘုတ်လေး အသုံးပြုပီးရေးပေးခြင်းဖြင့် ယူနီကုဒ် အသုံးကျယ်ပြန့်လာပီး ဇော်ဂျီအသုံးကို လျော့ချသွားစေလိုပါတယ် (Setting >> General > Keyboards >> Keyboards>> add new keyboard >> ttkeyboard >> UniZG
Windows မှာ built in ပါလာတဲ့ မြန်မာယူနီကုဒ်လက်ကွက် ဘယ်လိုကျင့်ရလဲလို့ မေးနေကြတဲ့ အောဖရင့်တွေ အတွက် အဆင်ပြေစေမယ့် website ဗျာ။ သူ့ ဆိုဒ်က စာတွေကတော့ တလွဲတွေ။အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်လေးတော့ လိုမယ်ဗျာ :3 http://www.typingstudy.com/my-myanmar-3/
မြန်မာ ယူနီကုဒ် သုံးချင်လာလို့ အိုင်ဖုန်းထဲဘယ်လို ထည့်ရမလဲ ? https://www.facebook.com/myanmariosusergroup/posts/1050286965062882 ယူနီကုဒ်စနစ်သုံးကြရင်တိုးတက်မည့် အပိုင်းတွေက တကယ်တန်းတော့ အများကြီးပါဘဲ ဖြည့်ပီးတွေးပေးပါလို့ ဆိုပါရစေခင်ဗျ https://www.facebook.com/myanmariosusergroup/posts/1050500545041524 သိပ်ကြီးကောင်းလွန်းနေလို့ သာလွန်းနေလို့ ဒီဘက်ကို နဲနဲ့ငဲ့ပေးပါအုန်းတဲ့ Dev တွေ ကြိုးစားပေးကြရင် ဇော်ဂျီ တိုးတက်မလာနိုင်ဖူးလား ဝိုင်းပြောပေးကြရင် ကမ္ဘာက လက္ခံလာမယ်ပေါ့ ... https://www.facebook.com/myanmariosusergroup/posts/1046496572108588 မြန်မာစာသည် တို့စာ မြန်မာစကားသည်တို့စကား https://www.facebook.com/myanmariosusergroup/posts/1046342878790624 Revolution ဆိုတာလေးကို အခြေအနေတစ်ခုကနေ တစ်ခုထင်ထင်ရှားရှား ပြောင်းလဲသွားတဲ့ အခြေအနေအချိန်အခါမျိုးတွေမှာ အသုံးပြုကြပါတယ်... https://www.facebook.com/myanmariosusergroup/posts/1043870819037830 ယူနီကုတ် မသုံးဘဲနေတာကြာရင် ပိန်းတက်ပါသလားတဲ့? https://www.facebook.com/myanmariosusergroup/posts/1043742562383989 အိမ်ပြောင်းပါ နေလာတဲ့
ဖုန်းအားသွင်းတဲ့အပေါက်မှာ ကွန်ပြူတာက usb keyboard အစစ်ကို တပ်သုံးတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ် bluetooth keyboard တတ်သုံးတဲ့အခါ ဖြစ်ဖြစ် Xiaomi TV လိုမျိုး Android စနစ်သုံး TV တွေ ရဲ့ usb မှာ keyboard တတ်သုံးတဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ် ကီးဘုတ်အစစ်ကို ချိတ်ဆက်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် သုံးနေကျ soft keyboard တွေဖြစ်တဲ့ frozen, bagan, m3, ဗေ, anysoft တို့က disable ဖြစ်သွားပြီး keyboard အစစ်နဲ့ စာရိုက်လို့ ရသွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် english စာ တစ်ခုတည်း ရပါလိမ့်မယ်။ ကျတော်လုပ်ပေးထားတဲ့ ဒီ nz physical keyboard layout ကို install လုပ်လိုက်ရင်တော့ မြန်မာလက်ကွက် layout တွေ ရလာပြီး ကီးဘုတ်အစစ်နဲ့ မြန်မာစာတွေ ရိုက်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ input setting ထဲမှာ ကိုယ်ရိုက်မယ့် language ကို enable လုပ်ထားပြီး english စာနဲ့ တလှည့်စီ ရိုက်နိုင်ပါတယ်။ (screen မှာ လက်နဲ့တို့ပြီး စာရိုက်လို့မရတဲ့ Android tv တွေမှာ ကီးဘုတ်အစစ်နဲ့ တပ်ပြီး မြန်မာစာ ရိုက်လို့ရပါပြီ) မြန်မာစာနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ ကီးဘုတ် switch shortcut က ဖုန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခု မတူနိုင်ပါ။ ကျတော့် Redmi Note (Xiaomi) မှာတော့ ctrl+space နဲ့ မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် ပြောင်းရိုက်လို့ရပါတယ်။ OTG မရတဲ့ ဖုန
ဇော်ဂျီသွင်းထားတော့ Google ရဲ့ app အများစုမှာ မြန်မာစာတွေမမှန်တော့တဲ့ပုံပါ။ နောက်ဆိုဒါမျိုးတွေများလာပါတော့မယ် Google က မြန်မာတွေဖတ်လို့ရအောင် မြန်မာလိုရေးထားသော်လည်း ဖတ်မရတာတွေ။ ဇော်ဂျီကမကောင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကောင်းခဲ့ပါတယ်၊ သူ့ကြောင့် web ပေါ်မှာ မြန်မာလို ရေးနိုင် ဖတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်၊ ဒါပေ့မယ် ခုခောတ်မှာ ရေးနိုင် ဖတ်နိုင်ရုံနဲ့ ကျေနပ်မနေသင့်တော့ပါဘူး။ ကွန်ပျူတာက မြန်မာစာကို သဘောပေါက်နားလည်ပြီး ရေးထားတာတွေကိုဖတ်ပြတာ ဥပမာ မျက်မမြင်တွေကိုဖတ်ပြတာမျိုးပေါ့ သူတို့လည်း fb သုံးချင်မှာပဲ။ ဘာသာပေါင်းစုံကနေ မြန်မာစာကို computer ကဘာသာပြန်ပေးတာမျိုးတွေပါ။ခုဆို google translate မှာရနေပါပြီ ဇော်ဂျီနဲ့တော့မဟုတ်တာသေချာပါတယ်။ ဒါကြောင့်နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်သူများကလည်း စတင်ပြီ ယူနီကုဒ်ကို သုံးကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာသုံးမြန်မာစာဟာ အိမ်နီးချင်ငံတွေနဲ့ ယှဉ်ရင်တော်တော်နောက်ကျကျန်နေခဲ့ပါပြီ။ ဒါကြောင့် ယူနီကုဒ်ဆိုတာလေးကို သုံးကြည့်စေချင်ပါတယ်လို့။ ကီးဘုတ်လုပ်ရင် ဇော်ဂျီ ယူနီအတွက် လုပ်ပေးရတဲ့ ဒုက္ခမှလည်းလွတ်ချင်ပါပြီလို့။ ယူနီကုဒ်ကပိုင်ရှင်မရှိလို့ ယူနီကုဒ်ကိုသုံးလိုက်လို့လဲ ပိုင်ရှင်ချမ်းသာသွားမှာမဟ
Android Lollipop MyanmarKatkuu.ttf ပါဝင်သော ဘာသာများ : ဗမာ, သက္ကတ/ပါဠိ, မွန်, ရှမ်း, စကောကရင်, ပိုးကရင်(အနောက်ပိုင်း), ပိုးကရင် (အရှေ့ပိုင်း), ပအိုဝ်း, ကယား, အရှိုချင်း, ပလေးပလောင်, ရူမာည်းတအောင်း,ခန္တီးရှမ်း, တိုင်းလျမ်ခေါ်ရှမ်းနီ, ရွှေပလောင်. သုံးစွဲနိုင်သော စနစ်များ Windows 8, 10, Android Lollipop Vivo MyanmarKatkuu Theme font *.txj* *https://drive.google.com/open?id=0B-dYNIHp2YidSEEtZEU2WFplakE* *Huawei MyanmarKatkuu Theme font.hwt* *https://drive.google.com/open?id=0B-dYNIHp2YidVDk4QWFYenhITGs* *iPhone Myanmar KatKuu 1.01.mobileconfig* *https://drive.google.com/open?id=0B-dYNIHp2Yidb0wySTVmQk1ZT0U* *Android Lollipop MyanmarKatkuu.ttf* *https://drive.google.com/open?id=0B-dYNIHp2YidWjlHWlJoWU1FM2s* **************** မွေတော်ကက္ကူ ဘုရားစေတီ တို့မှာ တောင်ကြီးမြို့ ၏အနောက်ဘက် ၂၆ မိုင်အကွာတွင်တည်ရှိသည်။ စေတီတော်တွေသည် ဉာဏ်တော်အမြင့် ၁၅ ပေ ဝန်းကျင်သာရှိသည်။ ဒေါက်တာသန်းထွန်း၏ ခန် ့မှန်းချက်အရ ခရစ်နှစ် ၁၈၀၀ လောက်ကတည်ထားခဲ့ကြောင်း ခန့် မှန်းထားပါသည်။ သာယာငြိမ့်ညောင်းတဲ့
Q. iOS မှာ မြန်မာယူနီကုဒ် သုံးချင်လို့။ ဇော်ဂျီလည်း ဖတ်ချင်သေးတယ်။ နှစ်မျိုးလုံး ဖတ်လို့ သုံးလို့ရအောင် လုပ်လို့မရဘူးလား။ A. ဒီမှာ အပြည့်အစုံပြောပေးထားတယ်။ https://www.facebook.com/groups/mmUnicode/permalink/1209042722439565/ Q. iOS မှာ မြန်မာယူနီကုဒ်စစ်စစ် ပဲသုံးချင်တယ်။ fb မှာ ဇော်ဂျီပါလာရင်လည်း ဖတ်ချင်သေးတယ်ဟ။ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြောင်းပြီး ကြည့်လို့ရတဲ့ နည်းမရှိဘူးလား။ A. ဒီလိုလုပ်။ iOS9 ထိတော့ ရသေးတယ်။ နက်ဖြန် 10 ထွက်ပြီ။ အဆင်ပြေမပြေပြန်ပြောပြ :3 https://www.facebook.com/groups/mmUnicode/permalink/1367333753277127/ Q. Facebook မှာ ဘယ်သူကမှ ယူနီကုဒ်နဲ့မှမတင်တာ။ ငါက စောင်ဆွာကြီးလုပ်ပြီး ယူနီကုဒ် သုံးတော့ ငါက ဘာနဲ့သွားဖတ်ရမှာလဲ။ ယူနီကုဒ်သုံးတဲ့ website တွေကောရှိလားဟ :3 A. စုပေးထားတယ် ဖရင့် fb page တွေကော ယူနီသုံးတဲ့ website တွေကာ :3 http://goo.gl/kQuCfJ Q. Windows 8, 10 မှာ ယူနီကုဒ်သုံးချင်တာ။ ဆိုင်က အဲ့တာ ဇော်ဂျီတွေထည့်ပေးလိုက်တယ်။ ဘယ်လိုလုပ်မတုန်း။ A. ဒါလေးနဲ့ အမြစ်ဖြုတ်လိုက်။ ကွီးကျော်သူရအောင် အိပ်ရေးပျက်ခံပြီး ရေးထားတာ http://goo.gl/ck3ffB Q. Windows မှာ ယူနီကုဒ်သုံး
Unicode ၏ အကြောင်း သိကောင်းစရာ Pdf လေးနဲ့ပေါ့ ဒေါင်းလိုက်ပါ https://app.box.com/s/4g30nclyp14ebenc3mts ကွန်ပျူတာသုံး Myanmar3 Keyboard & fonts https://app.box.com/s/hp1jvnnfp0clm4r3i9gq
All Download iPhone Myanmar Unicode Font .mobileconfig .zip https://drive.google.com/open?id=0B-dYNIHp2YidVDdzX1p5elhLQXM pyidaungsu-1.3.mobileconfig https://drive.google.com/open?id=0B-dYNIHp2YidT2FEMDN4cXJ3S0k KhunPaOh v1.01.mobileconfig https://drive.google.com/open?id=0B-dYNIHp2YidSUd3WjVzdGJiUms KhamKaung.mobileconfig https://drive.google.com/open?id=0B-dYNIHp2YidRlUzaUVlLUZJVDg Shan Unicode.mobileconfig https://drive.google.com/open?id=0B-dYNIHp2YidNlFBMHNLTWNaN0k NanKhone Web Pro.mobileconfig https://drive.google.com/open?id=0B-dYNIHp2YidY20wemlELWhiRjA MM Bagan v1.01.mobileconfig https://drive.google.com/open?id=0B-dYNIHp2YidNy1LemNtMU9uVkU MM Grand v1.01.mobileconfig https://drive.google.com/open?id=0B-dYNIHp2YidMWh3elRzTXJhcHc MM Hopong v1.01.mobileconfig https://drive.google.com/open?id=0B-dYNIHp2YidVUNVa2RER2lValk MM Jasmine v1.01.mobileconfig https://drive.google.com/open?id=0B-dYNIHp2YidWUNyb2s4d0VUOEU MM KatKuu v1.01.mobileconfig https://
Mp3 ဖိုင်တွေထဲက artist, title, album တွေ ဇော်ဂျီဖြစ်လို့ စိတ်ညစ်နေလား? စက်ထဲမှာ Java Runtime Environment ရှိမယ် ထည့်ထားပြီး ဖြစ်မယ်ဆိုရင် command line တစ်ခု run ရုံနဲ့ ရနိုင်ပါပြီ။ https://github.com/sanlinnaing/Mp3TagZawgyi2Unicode/releases/tag/v1.0-beta.1 အသေးစိတ်ကို အဲဒီမှာ ရေးပေးထားပါတယ်။ ပထမဆုံး စမ်းထားတာလေးကို မနေနိုင်လို့ ထ share တာပါ။ :D ဖိုင်တွေကို backup ထားပြီးမှ စမ်းကြည့်ပါကုန်။ java -jar Mp3Zg2Uni.jar "c:\_Music\_mp3" --opt check ဆိုတာက ဇော်ဂျီနဲ့ ပေးထားတဲ့ ဖိုင်တွေရှိလား စစ်တာပါ။ java -jar Mp3Zg2Uni.jar "c:\_Music\_mp3" --opt convert ဆိုရင်တော့ စစ်ပြီး ပြောင်းမှာပါ။
Huawei Myanmar Font Huawei Myanmar Font For Android Jell Bean and KitKat.hwt ဖုန်း Root ဖောက်စရာမလို FontStyle ကနေ ဖုန်းဗားရှင်း 4.2.2 အထက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်၊ အသုံးပြုအရမ်းလွယ်ကူပါတယ်။ အသုံးပြုပုံအောက်ပါတိုင်းကိုလုပ်ပေးရပါမည်။ Download ရလာတဲ့ *.hwt File ကို Copy လုပ်ပြီး HWTheme Folder ထဲကိုထည့်ပေးပါ၊ ပြီးရင်ဖုန်း Setting > Display > FontStyle မှာ မိမိ၏ထည့်ထားတဲ့ဖောင့်ကို Apply လုပ်ပေးပါ။ MyanmarBook Theme font https://app.box.com/s/585rp5mefswv0zyizdqncegtrj1bpz0q Huawei Myanmar Font For Android Jell Bean and KitKat.hwt Download Here All Download MM Font.zip https://drive.google.com/open?id=0B-dYNIHp2YidbUF1MkFCaTh3WUk KhunPaOh For Huawei Android KitKat.hwt https://drive.google.com/open?id=0B-dYNIHp2YidMDRBbS1qYk5xcWc Hsi Hseng For Huawei Android KitKat.hwt https://drive.google.com/open?id=0B-dYNIHp2YidQVluTEs0aEs1UWc MM Bagan For Huawei Android KitKat.hwt https://drive.google.com/open?id=0B-dYNIHp2YidUlZDdldEX2ZFdEk MM Grand For Huawei
ဇော်ဂျီယူနီ အရေးမှာ ယူနီသုံးအောင် မဲဆွယ်တဲ့ အနေနဲ့ ကျွန်တော်နားလည်သလို ရှင်းပြပြီး ဆွဲဆောင်ကြည့်ချင်တာကြောင့် ဒါကို (ဇော်ဂျီနဲ့) ရေးပါတယ်... နည်းပညာကို ထဲထဲဝင်ဝင် သိတာမဟုတ်ပဲ အပေါ်ယံလောက် လေ့လာပြီး ပြောတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အမှားအယွင်းတွေလဲ ရှိနိုင်တယ်.. ဒါကြောင့် ဒီထဲမှာ ပြောထားတဲ့ နည်းပညာ အကြောင်းတွေကို တထစ်ချတော့ မယုံစေ့ချင်သလို နားလည်သူများ ရှိရင်လဲ အမှားအယွင်းများ ရှိရင်လဲ ပြုပြင်ထောက်ပြပေးဖို့ စကားပလ္လင်ခံချင်ပါတယ်... ဇော်ဂျီယူနီအရေးဟာ သူ့ font ကောင်းတယ် ငါ့ font ကောင်းတယ်ဆိုပြီး ကိုယ့် font သုံးလာအောင် ပြိုင်နေတဲ့ အရေးမဟုတ်ပါဘူး... electronic မြန်မာစာစနစ်ရဲ့ ရှေ့ရေးအတွက် အင်မတန် အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စပါ... ဒါဟာ အမှန်နဲ့ အမှားကိစ္စပါပဲ... အင်း... မဲဆွယ်မယ်သာပြောတယ် တဖက်ကို အမှားလို့ စလိုက်တဲ့ ပုံစံကိုက ဖန်တရာထေ ကြားနေရတဲ့ မြင်ပြင်းကတ်စရာ စကားမှန်း သိပါတယ်... ကြည့်ရအောင်... မြန်မာစာကို ကွန်ပျူတာစနစ်ထဲ ထည့်ဖို့ စကြိုးစားကြတယ်... သေချာတာပေါ့... မြန်မာမှ မဟုတ်ဘူး ကွန်ပျူတာ ဘာသာစနစ်တိုင်းဟာ ယူနီကုတ်နဲ့ပဲ သွားရတာပဲ... (ဇော်ဂျီတောင် စည်းမထားတာကလွဲလို့ ယူနီကုတ်ကိုပဲ အခြေခံရမယ်လို့ ထင်ပါတယ်)..
ဒီမနက် အိပ်ယာထ ဖေ့စ်ဘုတ်လျှောက်ကြည့်ရင်း တစ်ယောက်က မြန်မာစာယူနီကုဒ်အကြောင်းပြောထားတာမှာ နောက်တစ်ယောက်ကဝင်ပြောတာက “ ယူနီကုဒ်က သုံးရခက်တယ် “ တဲ့။ အဲဒါနဲ့ ယူနီကုဒ်သုံးရတာမခက်ကြောင်း နဲနဲပြောချင်လာလို့ပါ။ ကျနော် ကွန်ပျူတာ စသုံးတတ်တာ ၂၀၀၆ နှစ်လည်လောက်မှစသုံးတတ်ပါတယ်။ ထောင်ကထွက်လာ ရန်ကုန် ရှေ့လာပြီးနောက်ပိုင်း စီးပွားရေးအရ လဘက်ရည်ဆိုင်ဖွင့်ထားရင်း ညဘက် ဆိုင်ပိတ်ချိန်ကြမှ နီးရာ အင်တာနက်ဆိုင်မှာ သွားသုံးရပါတယ်။ စသုံးကာစက လက်ကွက်ရိုက်တာ လက်နှစ်ချောင်းထိုး ပေါ့ဗျာ။ ဘယ်ညာ လက်ညိုးတစ်ချောင်းစီနဲ့ပဲ စာရိုက်တယ်။ နောက်တော့ တိုက်ပင်ကူျတာနဲ့ အင်္ဂလိပ်လက်ကွက် ကျင့်ဖြစ်တယ်။ နောက်ထပ် မြန်မာလက်ကွက် ကျင့်တယ်ပေါ့။ ခေတ်စားနေတဲ့ ဇော်ဂျီလက်ကွက်ပါပဲ။ ထုံးစံအတိုင်း အင်တာနက်ရေစီးထဲမှာမျှောနေရင်းကနေ ဂူဂဲလ်ဆာ့ချ်ကို နဲနဲသုံးတတ်လာတယ်။ တောသားဆိုတော့ အင်္ဂလိပ်လို အရေးအပြောညံ့ပေမယ့် နဲနဲတော့ဖတ်တတ်တော့ ဂူဂဲလ်ကနေ လိုက်ရှာ၊လိုက်ဖတ်၊ အဲဒီကနေမှ ကိုယ့်ဝါသနာအတိုင်း ဒေတာတွေစုတာ သိမ်းတာလုပ်လာတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုရော မြန်မာလိုရောပေါ့။ နောက်ပိုင်း ဘဘဦးဝင်းတင်ခေါ်တာနဲ့ ပြန်ကြားရေးမှာဝင်လုပ်၊ လူကနဲတော့ ရုံးခုျပ်နဲ့ ၅၄ခြံထဲမှာ ခိုင်းတာအ
Download Here https://app.box.com/s/komfucheezuep6lgigs6aw0zfoexbst3 Wallpapers and fonts ပါရင်မှသာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Download ရလာတဲ့ VivoPaOhOne.txj ဖွင့်ပါ ပြီးရင် Apply နှိပ်ပေးယုံပါပဲ မြန်မာယူနီကုဒ်လန်းနိုင်ပါပြီး။ ********* သို့မဟုတ် နောက်တစ်နည်းတော့ Download ရလာတဲ့ VivoPaOhOne.txj ကို ကူးယူပြီး Download Folder ထဲမှာ Theme Folder > Fonts Folder ရှိပါမယ် အဲ့ထည့်မှာ ထည့်ပါ ပြီးရင် Setting > Wallpapers and fonts > Font > PaOh One ကို Applying လုပ်ပေးရပါမည် အိုကေပါပြီ။ ----------- Please use this keyboard application to type Myanmar font easily. You can download it at : https://play.google.com/store/apps/details?id=mm.co.aty.android.m3keyboardl